IHHO Kit Renault Espace 1.9 dCi HHO Generator iX HHO FACTORY HHOKIT - HHO FEKTI, Ltd
Kwangathi 13, 2021 IQINISO LABO, Ltd
IHHO Kit Renault Grand Espace 5.5L 100km 1.9L dCi HHO Fuel Saver kit kufika ku-30% HHO KIT Carbon Clean
IHHO FACTORY, LTD ikhiqiza ama-'Plug-n-Play 'HHO Generators enjini yemoto yakho. I-HHO Generator isebenza ngokushesha lapho ihlanza futhi isusa amakhabhoni afaka ingaphakathi lenjini yakho negumbi lokushisa.
Lesi senzo sokuhlanza i-HHO Carbon sibuyisela injini yakho ethi 'Hlanza Njengokusha'.
I-Ireland esekelwe kwi-HHO IQINISO Ltd. isebenza ngokukhethekile ekulethiseni ubuchwepheshe be-carbon ekhipha-i-hydrogen emakethe yezwe lonke. Ama-generator we-HHO anobuhlakani bokuklama, ngokusebenza kahle kakhulu kuma-amps aphansi, ngokugxila komklamo oyinhloko ukunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni nokubuyisela ukusetshenziswa kophetholi okungcono ngokuhlanza injini yakho ngaphakathi nangaphandle.
Uma utshala imali yakho oyisebenzele kanzima ku-HHO Factory HHO Generator, uthola ukuhlolwa okusetshenziswe ngokuphelele futhi kucwaningwe ngokuphelele, okusetshenziselwa ukusetshenziswa kwe-Plug-N-Play Okusebenziseka kalula, okwenziwe e-Ireland, ucezu lwemishini esezingeni eliphakeme. Idizayinelwe ngokunakekela futhi ihlanganiswe ngokunemba, konke kususelwa ekuhlolweni okuphelele komhlaba wangempela nasekuhlaziyweni kwedatha, yonke i-HHO Factory HHO Generator izokwenza njengoba nje ithenjisiwe, uma usuyifake kahle, ngokuya ngemiyalo namavidiyo.
Wonke ama-KHO Generator Kits nakho konke 'I-Plug-n-Play'amayunithi avikelwe yi-EUIPO - I-European Union Intellectual Property Office.
Umphumela ongokoqobo wenqubo yokuhlanza nge-Active HHO carbon cleaner (HHO Kit) ukuthi abasebenzisi basitshele ukuthi bayabona futhi bayazizwa izinjini zabo zibuyiselwa ukuletha umnotho kaphethiloli ongcono.
Ngabakhiqizi bethu be-HHO X-CELL, awudingi ukushintsha noma ukusebenzisa i-ECU yakho ukuze uthole amandla noma umnotho wamafutha. Amazwe amaningi ayakwenqabeli ukusebenzisa noma yiziphi izinsimbi eziguqula i-chip noma i-sensor switching ukusebenzisa i-data ngoba kuvame ukukhuphula ukuphuma kwekhabhoni okuyingozi futhi kunganciphisa isikhathi se-injini, kulimaze ikakhulukazi i-alternator kwinqubo.
Kufanele uqaphele ukuthi ungazibandakanyi namaseli we-HHO angahloliwe, angenzi nzuzo enziwe ngokunganaki kumklamo wakudala. Lezi zivame ukwakhiwa ngaphandle kokuhlolwa kwesayensi, futhi imvamisa, zinamapuleti amaningi angathathi hlangothi, ngakho-ke ukuphela kwendlela yokunqoba ukuntuleka kwabo kolwazi lobuchwepheshe ukugcina ukwandisa ama-amps alethwe kumapuleti. Ibhethri ne-alternator kufanele zisebenze kanzima ukuthola lokhu okukhona, futhi noma yikuphi ukonga okwenziwe kugesi we-HHO kusetshenziselwa ukushayela i-alternator. Vele, ungalindela ukuthi i-alternator yakho nebhethri ibe nokuphila okufushane kokusebenza kule nqubo.
Kulungile!, Ngakho-ke izinto ezimbi. Futhi udinga ukuyazi ngoba kungenzeka kube khona amanye ama-HHO Generators laphaya angafanelani nenhloso.
Inzuzo enkulu kuwe, naku injini yakho ukuncipha kokuphuma, nokubuyiselwa kokusebenza kahle kwenjini yakho nophethiloli nodizili.
I-HHO IQINISO manje isiyitholile i-HHO X-Cell Generator yethu ama-HHO kits athuthukiswa ngonyaka ka-2019 futhi akhiqizwa yiHHO IQINISO, LTD lapha e-Ireland. Lawa makhithi asebenzisa amandla aphansi kakhulu we-200mA kuya ku-1.5 A ukufeza umphumela ongcono kakhulu wokunciphisa ukuphuma kwomoya, amandla andisayo futhi abuyisele ukusetshenziswa kawoyela okungcono enjini yakho encane naphakathi. Futhi lokho konke kuphansi ocwaningweni olubonakalayo lwe-HHO FACTORY, ukuhlolwa okuqhubekayo nokuphuculwa komklamo okuqhubekayo.
I-HHO Generator hydrolyzes amanzi ionized ku-O oxygen ne-Hydrogen gesi. Igesi le-hydrogen negesi i-oxygen kuthambisa ukuhlangana kwenhlanganisela yakho yamafutha ukuze isize ivutha ngokuphelele. I-HHO Gas isheshisa ukusakazeka komlilo ngaphakathi kwegumbi lakho lokuvutha, inikeze isikhathi esithe xaxa sokuhlangana (ngoba iqala ngokushesha futhi ishise ngokuphelele) ngaleyo ndlela ibangele ukumelana ngokuphelele kwamafutha.
Lokhu kusebenza okwandisiwe kunika amandla amaningi kuphethiloli wakho, ukujikeleza ngakunye kwe-crankshaft, futhi ungasheshisa ngokushesha uma ukhetha noma ushayela ngobumnene futhi injini yakho izokwazi ukusebenza kahle kukawoyela.
Awudingi inani elikhulu le-HHO Petr, kodwa udinga inani elifanele, elethwe ngendlela ephumelelayo futhi eqondile ngangokunokwenzeka. Futhi yilokho kanye i-HHO X-Cell Generator HHO kit ekwenza kangcono kakhulu.
esihlokweni esandulele IHHO Kit Opel Vauxhall Astra 1.4L 2014 HHO Generator iX HHO FACTORY HHOKIT
esihlokweni esilandelayo IHHO Kit yePeugeot 3008 1.6 HDI MPV 2013 HHO Generator iX HHO FACTORY HHOKIT